dia diamondra casino heist mendrika izany
Ny velona poker fifaninanana mpandraharaha nivarotra vokatra toy Henry Ford dia mivarotra fiara firy ny tsipelina slots no paladin manana 5e.
Raha te-hitondra tena henjana lalana mamakivaky ny fiainana dia tiako fotsiny tsy miraharaha izay olona sarobidy sy tsy miezaka ny mandresy lahatra ahy manokana ny soatoavina amin ' izy ireo. Raha ny mpanjifa danja Online Club Cash Lalao dia avy eo izy dia hahomby; raha tsy dia Yong dia mandeha firy ny tsipelina slots no lvl 1 magicien manana. Ireo fikambanana toy ny PokerStars, izao Tontolo izao ny Poker fitetezam-paritra (WPT), izao Tontolo izao Andian-Poker (WSOP), PartyPoker sy ny Eoropeana Poker fitetezam-paritra (EPT) ireo mpamokatra any amin'ny tontolon'ny aterineto ny filokana, ary ny mpilalao dia ny mpanjifa.
Ny Fanombohana ny Farany Poker stuttered vokatry ny maro be ny rindrambaiko glitches, mpilalao safidy sy ny aesthetics fa ny mpanjifa no tsy mihevitra ho sarobidy firy ny tsipelina slots no paladin manana. Koa nahoana izany no mitranga?Toy ny ankamaroan'ny zavatra eo amin'ny fiainana ny antony ara-bola.
Rob Yong, ny tompon-masoandro mody mandra-Maraina (DTD), dia vao haingana dia nanambara fa izy no niala poker raha ny Aterineto Club Cash Lalao fanatitra dia tsy fahombiazana. Ford dia tsy maintsy niezaka ny hivarotra ny olona iray ny soavaly, ka nahoana no poker tours miezaka mivarotra mijanona amin'ny sasany amin'ireo sarotra indrindra-toerana mba ho eo amin'izao tontolo izao?Tsy ny velona poker tours fa jamba ny lanjan'ny ny mpanjifa; ny tontolon'ny aterineto dia tsy misy hafa.
PokerStars dia indray mandeha indray ny sainam-pirenena maha-mpihazona rehefa tonga ny fahatakaran-javatra sarobidy. Izy dia milaza ny tenin 'ny zavatra izay aho ifotony mino' ary izany no fotoana izay te-fanerena dia diamondra casino heist mendrika izany. Sarobidy...dimy tsotra taratasy izay afaka mitarika ho amin'ny fandringanana na delirium ny poker raharaham-barotra.